Pr. Pool Kagaamee marraa 3ffaaf filachuuf Ruwaandaan heera fooyyessuuf deemti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Pr. Pool Kagaamee marraa 3ffaaf filachuuf Ruwaandaan heera fooyyessuuf deemti
Pr. Pool Kagaamee marraa 3ffaaf filachuuf Ruwaandaan heera fooyyessuuf deemti
Afrikaa keessatti sagalee filannoo saamuufi heera danquun umrii angoo dheereffachuun hedduu aadeffamaa dhufeera
Perezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen marraa 3ffaaf kaadhimamaa perezidaantii ta’ee dhiyaachuuf qophii eegale. Rakkoon: dheebuun isaa kan cabu yoo heerii biyyattii fooyya’e qofa.
Paartiin biyya bulchu hujii Kagaamee yeroo dheeraadhaaf angoo irra tursiisuu erga eegalee bubbuleera. Ruwaandaanis akkuma biyyoota Afrikaa heddu keessatti aadaa ta’aa dhufe, heera perezidaantiin biyyattii si’a 2 oliif akka hinfilamne daangessu karaa irraa kaasuuf deemti. Akkaataan ittiin fooyyeffamu isa biyyoonni biroo dhimma itti bayaniin (paarlaamaa ajajuu) adda garuu. Pool Kagaameen kan filate ummata magalaa hanga baadiyaatti dhaadannoo ‘simalee kan biyyaaf yaadau, dandettii qabu hinjiru’ jedhu irratti bobbaasuu. Kanaanis waan milkaayaaru fakkaata.
Kanaaf ragaan, akka angawoota Ruwaandaatti, ummanni miliyoona 2 ol ta’u Kagaameen si’a 3ffaaf akka isaan bulchuuf fedhii guddaa qabaachuu isanii mallattoo deeggarsaa wolitti qabaniin ifa godhaniiru waan jedhu. Sagaleen kuni akkamittuu wolitti haaqabamuu, ammatti mootummaan kan jedhaa jiru fedhii ummataa afoo dhaabachu hinfeenu waan jedhu. kana jechuun Kagaameef daandii qulqulleessuuf heerii biyyattii fooyya’uun waan hinhafne jechuudha. Kagaamaaen yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchuuf fedhii qabaachuuu isaa yeroo gaafatametti, ‘turuufi angoo gadi lakkisuun koo fedhiifi fundura biyyattii irratti rarra’a’ jechuun yaada rarra’aa laatee ture.
Mallattoon deeggarsaa miliyoona 2 ol ta’u kan sassaabame harka duubaatiin qindeessisiinsa dhaabicha biyya bulchuun (Patriotic Front) ta’uu isaati kan himamu. Kunis kan ta’eef aditti heera fooyyessuu irra, qeeqa abbaa irrummaa jedhu jalaa bayuuf, fedhii umatatti fakkeessuun irra waan woyyuuf jedhu taajjabdoonni. ‘Wonti Kagaamen addunyatti agarsiisuu barbaadu inni angoo gadi dhiisuuf qophii ta’us, garuu ummanni akka isa dhiisa hinjirre mul’isuudha,’ jedha hayyun siyaasa Francois Conradie. Kuni hundi diraamaadha: gocha fakkeessaa.
Akka heera Ruwaandaan amma qabduutti perezidaantiin tokko yoo filatame woggaa 7f biyya bulcha. Filatamuu kan danda’au ammo si’a 2 qofaaf; dimshaashatti woggaa 14f jechuudha. Si’a 3tti olguddate taanaan woggaa 21f biyyiti harka perezidaantii tokkootti kufti jechuudha. Pool Kagameen erga bara 1994 woraanaan biyya qabatee kaasee angawaan guddichi biyyattii isa.
Yaaliin umrii angoo dheerefachuuf heera ufumaa barreessan jijjiiruu waan Ruwaandaan eegalame ykn achumatti daangaye qofaa miti. Biyyoonni olla kanniin akka Koongoofi Burundiis waanuma wolfakkaatu raawwachuuf dadhabaa jiru. Yaaliin Burkiina Faasotti ta’e mormii ummataa guddaan fashaluun isaa yaadannoo yeroo dhiyooti.
heera biyyootaa jijjiiruu
Previous articleAl Jazeera: Elections, Ethiopian Style
Next articleLaaybeeriyaan Iboolaa too’annaa jala oolchite